HomeNewsक्होइँबो धीं निर्माणका लागि ‘भेडी गोठाले’ देखाइने
लमजुङ सदरमुकाम बेंसीसहरमा गुरुङ पुरोहितको प्येताँ अर्थात शास्त्र सिक्ने र सिकाउनेस्थल क्होइँबो धीं निर्माणका लागि गुरुङ संस्कृतिमा आधारित चलचित्र क्यु प्ह्रोँ छैं अर्थात भेडी गोठाले प्रदर्शन गरिने भएको छ ।
तमु प्ये ल्हु संघले निर्माण गर्न लागेको क्होइँबो धींको सहयोगार्थ मिलन डि.जे. इन्टरनेश्नल प्रालिद्धारा निर्मित भेडी गोठाले चलचित्र प्रदर्शन गर्न लागिएको हो । आयोजकले सदरमुकाम बेंसीसहरमा शुक्रबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरी क्होइँबो धीं निर्माणका लागि उक्त चलचित्र फागुन ७ गते विषेश प्रदर्शन हुने जनाएको छ । उक्त चलचित्र प्रदर्शन गरेबापत टिकटबाट उठ्ने सवै रकम क्होइँबो धीं निर्माणका लागि सहयोग गरिने चलचित्रको प्रस्तुतकर्ता कम्पनी मिलन डि. जे. इन्टरनेश्नलका प्रवन्ध निर्देशक एवं चलचित्रका निर्माता देउकी सिंजाली (दीपिका मिलन) ले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा तमु प्ये ल्हु संघका अध्यक्ष क्या. मिलबहादुर गुरुङले चलचित्र क्यु प्ह्रों छैं अर्थात भेडी गोठालेको विशेष प्रदर्शनबाट ५ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म उठाउने योजना रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा चलचित्रकी नायिका एवं तमु प्ये ल्हु संघकी जिल्ला सदस्य खुशी गुरुङले चलचित्रको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
उक्त अवसरमा चलचित्र क्यु प्ह्रों छैं अर्थात भेडी गोठालेकी निर्माता देउकी सिंजालीलाई क्रमु अर्थात पछ्यौरी ओढाउनुका साथै साथै पत्रकार रुद्र श्रीस मगर र प्ये ल्हु संघ प्रवास शाखा कतारका सदस्य राजेश गुरुङलाई क्रेगी (पगरी) गुथाएर सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा प्ये ल्हु संघका जिल्ला उपाध्यक्ष कुमबहादुर गुरुङले स्वागत मन्तब्य राख्नुभएको थियो । कार्यक्रमको संचालन तमु प्ये ल्हु युवा संघका अध्यक्ष शेष गुरुङले गर्नुभएको थियो ।
गुरुङ समुदायको इतिहास र परम्परासंग जोडिएको भेडी गोठलाई बचाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ निर्माण गरिएको उक्त चलचित्रलाई सुवास गुरुङले निर्देशन गर्नुभएको हो । कथा पनि उहाँले नै लेख्नुभएको हो । प्रेम कथा समेत रहेको उक्त चलचित्रमा महिला हिंसालाई रोक्नुपर्ने सन्देश पनि दिन खोजिएको छ । चलचित्रमा राजेश गुरुङ, मेखराज गुरुङ, सनम गुरुङ, अस्मि गुरुङ, खुशी गुरुङ, गौरी गुरुङ, ध्वज गुरुङ, सुवास गुरुङ लगायतका कलाकारले अभियन गरेका छन् ।
चलचित्रको कार्यकारी निर्मातामा हङकङ निवासी दुर्गा गुरुङ (मिलन) रहनुभएको छ । उहाँले भूकम्पले भत्किएको लमजुङको पाचोक गाविस २ छैलुङस्थित गणेशदेवी प्राविको अस्थायी टहरा निर्माणको लागि सहयोग गर्नुभएको थियो । यस्तै, इलमपोखरीका भूकम्पपीडितलाई जस्ता सहयोग गर्नुभएको थियो । उहाँले लमजुमङ बाहेक अन्य ठाउँमा पनि सहयोग गर्दै आउनुभएको छ ।
चलचित्रको निर्मातामा विजया गुरुङ (मिलन), विक्रम गुरुङ (मिलन), देउकी सिंजाली (दीपिका मिलन) रहनुभएको छ । चलचित्र २० लाख रुपैयाँको लगानीमा निर्माण गरिएको निर्माता देउकी सिंजालीले बताउनुभयो । लमजुङको इलमपोखरी, भारते, तनहुँको खहरे लगायत ठाउँमा छायांकन गरिएको चलचित्र १ घण्टा ५० मिनेटको रहेको छ । लमजुङमा पहिलोपटक प्रदर्शन गर्न लागिएको उक्त चलचित्र पोखरा, काठमाडौं, हङकङ लगायतका ठाउँमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिएको चलचित्रको प्रस्तुतकर्ता कम्पनी मिलन डि. जे. इन्टरनेश्नलले जनाएको छ ।
साभार : सप्तधारा डट कम
सुपरस्टार लोकगायक रामकुमार गुरुङ
सुक गुरुङको उपचारार्थ चैत्र २३ गते पोखरामा साँस्कृतिक कार्यक्रम, उपचारका लागि सहयोग गर्न समितिको आग्रह